Semalt: Kungani Okuqukethwe Kubalulekile I-SEO?
Okuqukethwe ne-SEO: Ubudlelwano
Ukudalwa kokuqukethwe okwenziwe kahle
Ukulungiselela okuqukethwe Okudaliwe
AbakwaSemalt Copywriters Banikeza Okuqukethwe Kwinjini Yosesho Olungiselelwe
Kungenzeka ukuthi uke wezwa le nkulumo kaningi, kodwa wake wazama yini ukuthola ukuthi kungani bebiza okuqukethwe yinkosi.
Yingoba okuqukethwe kunamandla okuthuthukisa izinga lewebhusayithi kumaSERPs (Amakhasi Wokusesha Injini).
Nokho, kuphela uhlangothi olukhanyayo. Uma kunamaphutha kokuqukethwe, kungaheha izinhlawulo ze-Google futhi kukhiphe iwebhusayithi yakho ngaphandle kweligi.
Le ndatshana izokusiza uqonde okuqukethwe, i-SEO, kungani okuqukethwe kubalulekile ku-SEO, ongakwenza ukuthuthukisa ikhwalithi yokuqukethwe, nokunye okuningi.
Isigaba sokugcina sihlanganisa nesisombululo sokumangala esingasiza okuqukethwe kwakho kudlule izimbangi zakho futhi kukwenze kube phezulu emiphumeleni yokucinga.
Okuqukethwe yiluphi ucezu lwemininingwane enenjongo oyethula ezilalelini zakho ngesiteshi. Lolu lwazi lungaba yinoma yini futhi nganoma uluphi uhlobo.
Kungaba umbhalo, isithombe, ividiyo, i-GIF, i-webinar, ividiyo ebukhoma, noma yini enye kuwebhusayithi, isiteshi sezokuxhumana komphakathi, uhlelo lokusebenza (iwebhu kanye neselula), noma kwenye indawo.
Ukuqonda okungcono, bona lezi zincazelo zokuqukethwe ezivela ochwepheshe abangaphezu kuka-40 kuMkhakha Wokumaketha iDijithali.
I-SEO (Injini Yokucinga) inqubo yokuthuthukisa ikhwalithi nenani lethrafikhi ye-organic iwebhusayithi yakho ethola ngayo ngezinjini zokucinga.
Uma, njengawo wonke umnikazi wewebhusayithi, inhloso yakho ukuhlela iwebhusayithi yakho endaweni ephezulu kuma-SERPs (Amakhasi Wokusesha Injini), i-SEO izosiza.
Namuhla, i-SEO ijikeleze iGoogle. Ngakho-ke, ungadideki uma othile efuna ukukhulisa iwebhusayithi yakho ngokusho kwe-Google.
Ukuze ufunde kabanzi nge-SEO, umgomo wayo wokusebenza, izinhlobo zawo, nezinye izinto ezifanele, hamba ngaleli umhlahlandlela we-SEO wokubeka uphawu kwabaqalayo nguSemalt.
Inhloso yazo zonke izinjini zokucinga ukuhlinzeka ngemiphumela efanelekile futhi ewusizo ngokushesha okukhulu. Kepha bakhomba kanjani ukuthi imiphumela iyasebenza futhi iyasebenziseka?
Yebo, kukhona ama-algorithms ukuthola ukuthi imiphumela ingaqondisa abasebenzisi kokuqukethwe okubalulekile noma cha. Lapho izinjini zokucinga ziqinisekisa ukuthi ucezu lokuqukethwe lunganikeza inani eliphezulu, balibeka kuqala.
Okuqukethwe kweNjini yokuSesha
Okuqukethwe okwenziwe injini yokusesha, noma okuqukethwe okuseqophelweni eliphezulu, kuyisiqeshana sezinjini zokucinga esibonakalayo esizonikeza usizo kubaseshi. Okuqukethwe okwenziwe kahle kakhulu ngokuya ngamanani wenjini yokusesha kuqala.
Ake sithi uqala usesho lwemikhiqizo eco-friendly ku-Google. Ngaphansi kwesekhondi, uhlu luzovela esikrinini sakho oluqukethe imiphumela efanelekile futhi ewusizo.
Umphumela wokuqala kulolu hlu uqukethe okuqukethwe kweinjini yokusesha okulungiselelwe kakhulu.
Izingxenye Zokuqukethwe Kwenjini Yosesho
Ukuhlonza nokwenza kahle kwezingxenye ezahlukahlukene zokuqukethwe kunquma ukuthi kuzokhuphuka yini phezulu emiphumeleni yokucinga noma cha.
Nazi izakhi eziyinhloko zazo zonke izinjini zokucinga ezenziwe kahle:
Uma unakekela lezi zingxenye, izinjini zokusesha zizohlonza okuqukethwe kwakho njengokuyigugu bese kukuklelisa kuqala. Asiqonde kubo ngamunye ngamunye.
Imininingwane iyiqiniso ngomuntu noma okuthile ofuna ukukuhlinzeka izilaleli zakho. Kungaba ngesimo semininingwane, izibalo, imiyalo, izeluleko, ukuholwa, noma yini ohlose ukuyinikeza.
Qiniseka ukuthi imininingwane oyinikezayo icacile futhi ayidideki ababukeli bakho.
Injongo yisizathu sokuthumela lolu lwazi ngaphandle. Kungaba ukufundisa, ukwazisa, ukuzenza ithandwa, ukwethula ibhizinisi lakho, noma yini enye. Inhloso futhi ifaka okulindelwe kwakho ngemuva kokuhlinzeka lolo balaleli lolo.
Qiniseka ukuthi uklama imininingwane ngendlela yokuthi ixhumeka nezithameli futhi ihlangabezana nezinhloso zakho.
Izithameli ngumuntu olindelekile noma iqembu labantu ofuna ukuthola imininingwane. Ukuqondisa izithameli ezifanele kukusiza ukusetha izinto ezinjengemininingwane, ithoni, kanye nokuvela kwemininingwane ofisa ukuyinikeza.
Khomba izithameli zakho ezihlosiwe, izidingo zazo, izinkinga ezibhekene nazo, nemibuzo abangayibuza ngemuva kokuthola imininingwane yakho. Hlela okuqukethwe okuphakathi kwezithameli zakho, hhayi okunye.
Ifomu ukubukeka kokugcina kolwazi lapho ulwethulela izilaleli zakho. Thola ukuthi izilaleli zakho eziqondayo zizokuqonda kanjani kangcono - ngendlela yombhalo, isithombe, umsindo, noma ividiyo.
Okokuqala, nquma uhlobo lokuqukethwe kwakho - okufundisayo, okungokomzwelo, okungathí sina, noma okuhlekisayo. Bese ukhetha ukuthi ufuna ukwethula kanjani.
Isiteshi yisikhathi lapho imininingwane yakho ifinyelela kuzithameli. Kungaba iwebhusayithi, ibhulogi, inkundla yezokuxhumana nabantu, uhlelo lokusebenza lweselula, ithelevishini, iphephandaba, noma yini engaxhumana kangcono nezithameli zakho ezihlosiwe.
Qiniseka ukuthi okuqukethwe kwakho kuyatholakala eziteshini lapho izithameli zakho eziqondayo zisebenzisa isikhathi esiningi.
Okuqukethwe okwenziwe kahle kubalulekile ngoba kuzosiza izinga lakho lewebhusayithi liphezulu kumakhasi womphumela wenjini yokusesha. Kuzothuthukisa ukubonakala kwakho ku-inthanethi.
Ngenkathi udala okuqukethwe okwenziwe kahle, qiniseka ukuthi maphakathi nezidingo zezilaleli zakho eziqondisiwe, futhi zonke izakhi zokuqukethwe okwenziwe kahle kwezinjini zokucinga zinakekelwa kahle.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukubheka izinto ezimbalwa zobuchwepheshe ezifana namagama angukhiye, ama-URL, izincazelo zemeta, izihloko ze-meta, nezinye.
Kunezinyathelo ezimbalwa wonke umuntu okudingeka azilandele ngenkathi enza okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu. Kunjalo:
1. Ucwaningo lwegama elingukhiye
Ucwaningo lwegama elingukhiye luyinto yokuqala okufanele uyenze ngoba amagama angukhiye afanele kuphela aqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuyatholakala ngemiphumela yokucinga.
Ngenkathi ucwaninga, zama ukugwema amagama angukhiye ancintisanayo kakhulu futhi ukhethe amagama angukhiye omude. Ungathatha nosizo lwethuluzi lokucwaninga lamagama angukhiye afanele, njenge-Keyword Planner evela ku-Google.
2. Qeda Isihloko
Ngemuva kokukhetha amagama angukhiye afanele, kufanele uqedelele isihloko sokuqukethwe kwakho. Ngokwesikhundla esiphakeme, kubalulekile ukufanisa isihloko namagama akho asemqoka. Ngamanye amagama, isihloko sakho kufanele siqukathe igama elingukhiye.
3. Dala Uhlaka
Manje, kufanele udale uhlaka lokuthi konke okuqukethwe kwakho kuzoqukethela ini. Nquma isihloko, zingaki izihlokwana, okubonakalayo, nokuthi mangaki amagama.
4. Kwenze Kufundeke Kalula
Yenza okuqukethwe kwakho kufundeke kalula ngokukuhlephula ngezigaba ezincane zemisho engu-1-2. Faka okubonwayo / izihlokwana ngemuva kwamagama ayi-150-250.
Abafundi bachitha isikhathi esincane kakhulu ekhasini lewebhu. Uma zingaboni lutho oluhehayo ukunamathela, zizohamba.
5. Musa ukwehla kusuka esihlokweni
Lapho udala okuqukethwe, namathela esihlokweni. Akudingekile ukufaka konke kucezu olulodwa lokuqukethwe. Gxila esihlokweni bese uzama ukuwenza ube lusizo.
6. Namathela ku-Target Keyword
Okuqukethwe kwakho kufanele kube maphakathi negama lakho elingukhiye eliqondiwe. Uma ufuna okuqukethwe kwakho kuqale kuqala, namathela kugama lakho elingukhiye oqondiwe futhi ungaqondile amagama amaningi okhiye.
7. Faka phakathi izixhumanisi
Izinjini zokusesha ziyaqaphela ukuthi okuqukethwe kwakho kunokwethenjelwa uma kuqukethe izixhumanisi zamawebhusayithi afanele, athembekile, futhi anegunya. Qiniseka ukuthi amagama owasebenzisayo ukwakha izixhumanisi ahlobene nesayithi eqondisiwe.
Isibonelo, bona isixhumanisi esingezansi esiqukethe igama eliyisihluthulelo 'Umhlahlandlela we-SEO Wabasaqalayo.' Uma uqhafaza kulesi sixhumanisi, sizokudlulisela kuwebhusayithi yeSemalt, lapho uzothola khona into efanayo eshiwo kulesi sixhumanisi.
Ukulungiselela okuqukethwe okwakhiwe kusho ukuthi ufaka isici sobuchwepheshe bokusebenza kokuqukethwe.
Kubandakanya nokwenza kahle okulandelayo:
Ake sibaqonde ngamunye ngamunye:
Isakhiwo se-URL sekhasi lewebhu yinto yokuqala abasebenzisi bosesho abayibonayo. Uma i-URL yakho ingenalo igama eliyisihluthulelo elifanele, amathuba abasebenzisi bangase bangavakasheli isayithi lakho.
I-URL engaqondakali futhi ende ihlala isabisa abasebenzisi bosesho, futhi bayanqikaza ukuxhumeka kusixhumanisi. Qonda ngalezi zixhumanisi ezintathu ezishiwo ngezansi:
I-https: //semalt.com/fullseo - Abasebenzisi bayaqonda masinyane ukuthi lesi sixhumanisi sizobathumela ekhasini lewebhusayithi yeSemalt equkethe imininingwane mayelana ne-FullSEO. Ngeke banqikaze ukukuchofoza.
I-https : //www.nytimes.com / 2006/08/73 / 2007.technology/27google.html? imininingwane ehlobene ne-SEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Abasebenzisi abaqondi ukuthi le nto yokuxhumana imayelana nani. Ngakho-ke, bayanqikaza ukukuchofoza.
Ithegi yesihloko yisihloko (esichofozayo) osibona emiphumeleni yokucinga. Basiza i-Google, nezinye izinjini zokucinga, ukuqonda okuqukethwe kwakho.
Amathegi esihloko nawo ayisici esinqumayo lapho abasebenzisi kufanele bakhethe umphumela ofanele wokusesha ofanele. Cabanga ngalezi zinto ezine ezibalulekile ngenkathi unikeza amathegi esihloko:
Cacisa ngenkathi udala ithegi yesihloko.
Musa ukubeka umaki wethegi ngamagama angukhiye amaningi.
Qinisekisa ukuthi ayidluli izinhlamvu ezingama-60
Igama elingukhiye eliqondiwe kufanele libe ekuqaleni.
I-snippet yombhalo omncane oyibona ngezansi kwesihloko esithi tag / isihloko esichofozayo kanye ne-URL ibizwa ngokuthi yi-Meta.
Incazelo ye-meta efundisayo neqondayo ne-iphuzu equkethe igama elingukhiye eliqondiwe liheha ukuchofoza okuningi. Cabanga ngalezi zinto ezintathu ezibalulekile ngenkathi uchaza incazelo ye-meta:
Qiniseka ukuthi i-snippet yombhalo ingezinhlamvu ezingaphansi kuka-160.
Yenza umbhalo ungafinyezi futhi ube ngamafuphi umbono othize wokuqukethwe.
Faka igama elingukhiye eliqondiwe namagama angukhiye afanele.
Le ndatshana ichaze ukuthi kungani okuqukethwe kubalulekile ku-SEO nokuthi yini ongayenza ukudala okuqukethwe kweinjini yokucinga.
Yini uma konke lokhu nabalobi abaningi bengcweti bekwenza?
Ababhali bekhophi ochwepheshe eSemalt abagcini ngokunakekela okuqukethwe kwakho kuphela kodwa futhi baqinisekisa ukuthi igcina uhlu lwemiphumela yokucinga ye-Google futhi ikhiqize intshisekelo yomsebenzisi.
Wonke amabhizinisi noma umnikazi wewebhusayithi udinga okuqukethwe kwamakhasi e-web, okuthunyelwe kwebhulogi, amapulatifomu ezokuxhumana nabantu, izinkomba zokuthi uwenza kanjani, nabanye.
Uma baqasha umbhali wamakhophi wesikhathi esigcwele, angahle angalingani nesabelomali sabo. Futhi, i-freelancer ingathatha isikhathi esiningi ukwenza okuqukethwe.
Kwakha ukudideka emiqondweni yabaningi bebhizinisi noma abanikazi bewebhusayithi, futhi abaqondi ukuthi benzeni.
Hhayi, akusona isimo sokudideka kodwa ukucabanga ngesixazululo / Semalt. Ababhali bekhophi e-Semalt baqinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho zokuqukethwe zinakekelwa ngokunembile.
Kwesinye isikhathi ngenkathi zenza ubuhle bokuqukethwe, abantu benza amaphutha amancane athinta izinga lewebhusayithi labo kakhulu. Ukugwema lokhu, kufanele uqashe ababhali abasebenza ngochwepheshe bakwaSemalt.
Okuqukethwe kweSemalt + Okuphezulu - Uzoceba.